03/20/13 ~ Myanmar Forward
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ မြင်ကွင်း ရုပ်/သံ
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း | No comments
မိတ္ထီလာမြို့ရှိ မြို့မဈေးကြီးတွင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွါးမှုကြောင့် ရွှေဆိုင် တခုပျက်ဆီးခဲ့ ပြီး လူတချို့ ဒဏ်ရာရ ခဲ့ပါ တဲ့ မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ မြင်ကွင်း ရုပ်/သံ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့ဈေးကြီးမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွါး ရွှေဆိုင်တဆိုင် ပျက်စီးပြီး လူတချို့ ဒဏ်ရာရ
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မိတ္ထီလာမြို့ဈေးကြီးအနားက ရွှေဆိုင် တဆိုင်ကို လင်မယားနှစ်ယောက် ရွှေလာရောင်း ရာက အရောင်း အ၀ယ်မှာ ပြဿနာ တက်ပြီး ဆိုင်ရှင်က ရိုက်နှက်ခဲ့လို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အခြေ အနေတွေကို ရဲတွေက ထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်လို့ ဘီဘီစီက စုံစမ်းသိရပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့က နယူးဝိန့်စိန်ရွှေဆိုင်ကို မွတ်ဆလင်က ပိုင်တယ်လို့ သိရပြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နား ပြွန်ကောက် ရွာက ကိုခင်မောင်ဝင်းတို့ လင်မယားက အလှူအတွက် ဒီမနက်က ရွှေလာရောင်းရာက ဈေးနှိမ်တဲ့အပြင် ရွှေလက်ကောက် လည်း ကျိုးပဲ့သွားပြီး ပြန်လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရာက ဆိုင်ရှင်က ကိုခင်မောင်ဝင်းကို ရိုက်နှက် ခဲ့လို့ ပြွန်ကောက်ရွာခံတွေက ဆိုင်ကို ပြန်လာပြီး တိုက်ခိုက်မှုတချို့ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိတ္ထီလာအမှတ် ၂ ရဲစခန်း တာဝန်ကျ အရာရှိကတော့ ရဲအင်အား ၈၀ နဲ့ အခြေအနေကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်း ထားလိုက်ပြီလို့ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အခုလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ မိတ္ထီလာဈေးကြီးက ဈေးဆိုင်တချို့လည်း မွန်းလွဲပိုင်းကစလို့ ပိတ် လိုက်ကြ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီက ဦးဝင်းထိန် ကလည်း အခြေအနေတွေကို ပြေလည်အောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ မိတ္ထီလာကို ရန်ကုန်ကနေ သွားနေတယ် လို့လည်း ဘီဘီစီက စုံစမ်းသိရပါတယ်။
သတင်း-- BBC Facebook
Photo From: Thit Htoo Lwin Blog
မိတ်ထီလာမြို့ မိတ္ထီလာ ဈေးအတွင်းရှိ ရွှေဆိုင် တခုမှာ ၂၀-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်က ရွှေ အရောင်း အ၀ယ်ပြုလုပ် ရာကနေ မကျေမလည် ဖြစ်ပြီး ရွှေဆိုင်ဖြိုဖျက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းက ပြောပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - လူထု မောင်ကာဠု
“ဖြစ်တာက ရွှေလာရောင်းတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်။ ရွှေဆိုင်မှာ ရှိတာက ၃ ယောက်။ အဲမှာ ရွှေ ရောင်းရွှေဝယ်လုပ်နေရင်း အချင်းများပြီး ရန်ဖြစ်ကြတာ။ လာရောင်း တဲ့သူ (ယောက်ျား) က အရိုက် ခံလိုက် ရတယ်။ ဒဏ်ရာကတော့ မစိုး ရိမ်ရဘူး၊ ခေါင်း နည်းနည်း ပေါက်သွား တယ်။ ဘာမှတော့ မစိုးရိမ် ရဘူး။ အမျိုးသမီးလည်း မစိုးရိမ် ရဘူး။”
အဲဒီလို အချင်းများ ရာကနေ ဘေး ပတ်ဝန်းကျင် ကလူတွေပါ ရောက်လာပြီး ထင်ယောင် ထင်မှားနဲ့ ရွှေဆိုင်ကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးကြ တာလို့ ပြောပါတယ်။
အခင်းဖြစ် နေရာကို သွားရောက်ကြည့် ရှုခဲ့တဲ့ အထက်မြန်မာပြည် ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် (မိတ္ထီလာ)က ကိုအောင်နေပိုင်က ဒီနေ့ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“သာမန် ဖြစ်စဉ် လို့ပဲပြောမယ်။ လူမျိုး ရေးကိစ္စနဲ့တာ့ တအားကြီးမဆိုင်ဘူး။ မိတ္ထီလာ ကလည်း ဒါမျိုး အစဉ် အလာ လည်း ရှိတာ နည်းတယ်။ ဒီအတိုင်း ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ လူတွေက အာရုံ စိုက်သွား တာလောက် ပဲလို့ မြင်တယ်။ ဒီနေ့ မြင်ရတဲ့ ကိစ္စ မှာကျတော့ မိတ္ထီ လာအနေနဲ့ ရဲ၊ လုံခြုံရေးအင် အားလည်း အဆင်ပြေတယ်။ ရဲအင် အားလည်း အချိန်မီ ရောက်သွား နိုင်တယ်။ ဖြစ်တဲ့ပြဿ နာမှာလည်း ဘာသာရေး ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုး ရေးတွေကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးချင်းကြောင့် ဈေး ၀ယ် သူနဲ့ ဈေးရာင်းသူချင်း ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ပဲ မြင်တယ်။”
အခြေ အနေကို မိတ်ထီလာ ရဲစခန်းက ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်းဖြစ်အောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် နေ တယ်လို့ ရဲ တာဝန် ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူသေဆုံး မှုမ ရှိဘဲ ပစ္စည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံး တာပဲ ရှိခဲ့ပြီး မိတ်ထီလာ ဈေးကိုတော့ ပိတ်ထား လိုက်ရပါတယ်။
ညီအစ်ကိုချင်း ဓါးထိုးမှု ဖြစ်ပွါး တစ်ဦးသေ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under မှုခင်း,ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဟင်္သာတ၊ မတ် ၂၀။
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့ လယ်တီ ကွင်းရပ် အောင်ချမ်းသာလမ်းတွင် (၁၉-၃-၂၀၁၃) နေ့၊ ည (၁၀း၁၅) အချိန်ခန့်၌ ညီအစ်ကိုချင်း စကားများ ရာမှ ဓားထိုးမှု ဖြစ်ကာ အစ်ကိုကြီး ဖြစ်သူ မှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးပြီး၊ အစ်ကိုလတ်မှာ ဆေးရုံ တွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသမှု ခံယူလျက် ရှိသည် ဟု သတင်းရရှိ သည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ အောင်ချမ်းသာလမ်းတွင် နေထိုင်သော အဖ ဦးစိုးမြင့်၊ အမိ ဒေါ်ရင်မြင့်တို့မှ မွေးဖွားသော ညီအစ်ကို အရင်းများသည် သီရိအောင်မြေရပ် အတွင်း အရက်ဖြူဆိုင်တွင် သောက်စား မူးယစ်ပြီး အိမ်သို့ ပြန်လာကြောင်း၊ အိမ်တွင် အစ်မ ဖြစ်သူများနှင့် ထမင်း အတူစားရင်း ညီအစ်ကိုချင်း စကားများရာမှ အငယ်ဆုံး ဖြစ်သူ အောင်ကျော်စိုး (၂၀)နှစ်ခန့် သည် အစ်ကိုကြီး ဖြစ်သူ ခင်ဇော်(ခ)သံချောင်း (၃၂)နှစ်ခန့်အား ဓားဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးရာ အစ်ကိုကြီးဖြစ်သူ မှာ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။
ထို့နောက် အစ်ကိုလတ် ဖြစ်သူ ဇော်နိုင်ထွန်း(၃၀)နှစ်ခန့်အား ဓားဖြင့် ဆက်လက်ထိုးသောကြောင့် အစ်ကို လတ်ဖြစ်သူမှာ ဒဏ်ရာရရှိကာ ဟင်္သာတမြို့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် အတွင်း လူနာ (စိုးရိမ်ရ) အဖြစ် ကုသမှု ခံယူလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရားခံ အောင်ကျော်စိုးအား အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထားပြီး တရားခံအား ယမန် ယူနေသည်ဟု သိရသည်။
ပေးပို့သူ- ဟင်္သာတ မီဒီယအဖွဲ့
တီးတိန်မြို့နှင့် တမူးမြို့များတွင် အသက်၁၅နှစ်အထက်များကို “အ” သုံးလုံးသင်ပေးမည်
ကလေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များက ပညာရေး ၀န်ကြီး ဌာန၏ အထူး စီမံချက်ဖြင့် ချင်းပြည် နယ်ရှိ တီးတိန် မြို့နှင့် တမူးမြို့ များတွင် “အ”သုံးလုံး သွားရောက် သင်ကြားပေးကြမည်ဟု ကလေး တက္ကသိုလ်မှ Dr.သက်နိုင်ဦး(Bio)၏ ပြောပြချက်အရ သိရှိရ သည်။
ဗမာစာ သည် ရုံးသုံး စာဖြစ်၍ ချင်းပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်း သားများ ဗမာစာ၊ ဗမာစကား တတ်မြောက်စေရန်
ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် “အ” သုံးလုံးသင်တန်းများ သင်ကြားပေးခြင်း ဖြစ်သည် ဟုကလေး တက္ကသိုလ်မှ ဆရာ သိန်း (ရုက္ခဗေဒ) က ပြောပြ ခဲ့ပါသည်။
" ကျွန်မ ကတော့ တီးတိန် ကိုလိုက်ဖို့ ဆန္ဒပြု ထားပါတယ်။ အဲဒီလို တောင်တန်း ဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်း သားတွေ ကို အသုံးလုံး သင်ပေးဖို့ စိတ်ဝင် စားတယ်။ အတွေ့ အကြုံ လည်း ရချင်လို့ပါ။ (၁၅)နှစ် အထက်တွေ ကို သင်ပေးရ မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသုံးလုံးသင်သွားပေးမယ့် ဆရာတွေ အတွက် စားစ ရိတ်တွေကို ပညာရေးက တာဝန်ယူပေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာစကားကို နားမ လည်တော့ သင်ပေးဖို့အခက်အခဲတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာတွေကလည်း ကျွန်မတို့ကို သင်ကြား နည်း ပုံစံတွေ သင်ပြထားတယ်။ ကိုယ်ကလည်း စေတနာထားပြီးကြိုးစား သင်ပေးသွားမှာပါ။ ဥပမာ- သူတို့ထဲမှာ ၀ တဲ့သူပါရင် သူ့ကို ထခိုင်းပြပြီး အဲဒါကို " ၀ "လို့ခေါ် တယ် ဆိုတာမျိုး သရုပ်ပြ သင်ပေး ရမှာပေါ့ " ဟု တီးတိန်မြို့သို့အသုံးလုံး သင်တန်းလိုက်သင် ပေးမည့် ရူပဗေဒကျောင်း သူ မစော သန္တာကပြောသည်။
ကလေးတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အရောက်(၄၈၀) သွားရောက် သင်ကြားပေးကြမည် ဖြစ်ပြီး သင်ပေးမည့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ/သားများကို နေပြည်တော် ပညာရေးအဖွဲ့မှ (၁၅.၃.၁၃)ရက်နေ့က ကလေး တက္ကသိုလ်တွင် သင်တန်းပေးခဲ့ကာ သင်ရိုးညွန်းတမ်းနှင့် စီဒီခွေများ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
အဆိုပါ “အ” သုံးလုံး သင်ကြား ပေးခြင်းသည် ၄၅ရက် ကြာမြင့် မည်ဖြစ်ပြီး ယခုမတ်လ ၂၉ရက်နေ့တွင် တီးတိန်မြို့နှင့် တမူးမြို့တွင် “အ”သုံးလုံး သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို တပြိုင်နက် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
လက်ပံတောင်း ကြေးနီ စီမံကိန်း ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ် ၍ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင် မှုများမှာ အစိုးရ တရပ် လုပ်ဆောင် ရမည့် တာဝန် များ ကို ဆောင်ရွက်နေ သကဲ့ သို့ ဖြစ်နေ သဖြင့် တစုံ တရာ မှားယွင်း နေပါသည်။
တကယ် တမ်းတွင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ တာဝန်မှာ အချက် အလက်များ ရှာဖွေရန်သာ ဖြစ်ကာ အစိုးရတရပ်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ် ချက် များ ချမှတ်ရန် မဟုတ်ပေ။ အကြောင်း မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကဲ့သို့ အစိုးရ တရပ်ကို ဦးဆောင်နေသူ တဦး မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင် အနေဖြင့် အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း အစိုးရ အနေဖြင့် အရာရာတွင် ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လိ မ့်မည် ဟုတော့ တထစ်ချ ယူဆ၍ မရပေ။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ အကန့်အသတ် ရှိနေမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ် ငန်း များ စတင်သည့် အချိန်ကတည်းက ရွာသားများ သေသေချာချာ သဘောပေါက်စေရန် အတွက် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထွက်လာသည့်အခါ ထိုအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သတ်၍ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ၏ ချဉ်းကပ် ဆောင်ရွက်ပုံအပေါ် ရွာသားများ စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပုံ ရပါသည်။ ၎င်းတို့က ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အား စီရင်ဆုံးဖြတ်သူ (decision maker) တယောက်ကဲ့သို့ သဘော ထား လိုက်ကြ သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မိမိကိုယ်ကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူ တဦးသ ဖွယ် သဘော ထား၍ ရွာသားများကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အကျိုးဆက် အနေဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအား အသက်ရှူပေါက် ရသွားစေခဲ့သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပျက်စီးသွားသည့် အခြေအနေများကို ကုစားရန်အ တွက် သေချာစွာ တွေးတော ဆောင်ရွက်ရပေတော့မည်။ အများပြည်သူက ဒေါ်စုအပေါ် ထင်မြင်နေ သည့် ပုံရိပ် ထိခိုက်သွားနိုင်သလို ဒေါ်စု အနေဖြင့်လည်း သူ၏ အေးဆေး တည်ငြိမ် စွာ ဖြေရှင်းနိုင် မှုကို ပြန်လည်ရရှိရန်မှာ ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှု တခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါက သူ့အတွက်လည်း အကျိုးရှိ လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ တောင်ကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆက်လည် တည်ရှိနေစေချင် ရသည် လဲဟု မေးမြန်း လိုက်ခြင်းသည် ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်၏ ပုံရိပ်ကို အထိခိုက်နိုင်ဆုံးသော စကားတရပ်ဖြစ်ကာ ထိုကဲ့သို့ မေးမြန်း လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ဒေါ်စုနှင့် ရွာသူရွာသားများကြားတွင် များစွာ ကွာဟသွားစေခဲ့သည်။
ဒေါ်စုအနေဖြင့် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေး၍ ပြောဆိုနေသည်မှာတော့ ထင်ရှားပါ သည်။ ကြေးနီး စီမံကိန်းကို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးကို အထောက် အကူ ပြုလိမ့် မည်ဟု ရှင်း လင်းပြောပြရုံဖြင့် စိတ်ထိခိုက်နေသော ရွာသူရွာသားများက သဘောတူ လက်ခံလာ လိမ့်မည် ဟု ဒေါ်စု အနေဖြင့် မျှော်လင့်ခဲ့ပါသလား။ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရွာသား များ က ငဲ့ကွက်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ပါသလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူသည် လူအများ ထောက်ခံမှုကို ရှာဖွေနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ထပ်တလဲ လဲ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ရွာသားများ၏ အမျက်ဒေါသကတော့ ပြေပျောက် မသွားခဲ့ပေ။ ထို့ပြင် အားလုံးကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရမည့် သူများမှာလည်း ရွာသူရွာသား များသာ ဖြစ်ကြ သဖြင့် ဒေါ်စု တွင် ပြောပိုင်ခွင့် ရှိသည့် ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပေ။
ဒေါ်စုက သူသည် နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း အများပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် သည်လည်း နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ပင်ဖြစ်၍ လျစ်လျူရှု၍ မရပေ။
ဒေါ်စု အနေဖြင့် ရွာသူရွာသား ၃၀၀ ခန့်ကိုသာ ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း လက်တွေ့ တွင်မူ နိုင်ငံ အနှံ့မှ ရွာသူရွာသား သန်း ၄၀ ခန့်က ဒေါ်စု၏ အသံကို နားထောင်ကြပေမည်။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုထောင့်မှာ ဆိုပါလျှင် တောင်တန်းများနှင့် သစ်တောများ မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လှပသော နိုင်ငံသည် ဆာဟာရ ကဲ့သို့ ကန္တာရ တခုအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားနိုင်သလို ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက် ပိုင်းမှ Isarn ဒေသတွင်လည်း သစ်တောများကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းကာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြ သောကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပြီး ရေရှည်တွင် ဒေသခံများ စီးပွါးပျက်ကြသောကြောင့် ဒေသ တွင်းမှ ဆင်းရဲသားများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ သမီးများကို ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများတွင် ထိုးအပ် လိုက်ရသည် အထိ အခြေအနေ ဆိုးခဲ့ရသော ဥပမာကလည်း ရှိနေပြန်သည်။
ထို့ပြင် လက်ပံတောင်း ကိစ္စအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိပါက တနိုင်ငံလုံးတွင် အခြေအနေ များ ပေါက်ကွဲ ထွက်ကာ လယ်ယာမြေများ အသိမ်းခံရသည့် လယ်သမားများ ပါဝင်သည့် အုံကြွမှုမျိုးလ ည်း ဖြစ် လာနိုင်ပေ သည်။ ထိုလယ်သမားများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန် နေကြမည် ဖြစ်သလို အချို့မှာ ဆောက် တည်ရာ မရ ဖြစ်နေနိုင်ပေသည်။ ထိုသို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှ တဆင့် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ အခြေအနေမျိုး တခုပြီး တခု ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဆိုလျှင် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် မည်သည့် အဖြစ်အ ပျက် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြပေမည်။
ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်သူများ အနေဖြင့် နီးကပ်သော အနာဂတ်ကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်သည့်အပြင် စီးပွါးရေး ရှုထောင့် မှသာမက နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်မှလည်း စဉ်းစားသင့်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်း ရယူထားရသည့် အရာများ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးသွားရသည့် အဖြစ် မျိုး မဖြစ်သင့်ပေ။ ။
(မြတ်သူပန် သည် မြန်မာ့ မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံရေး၊ လူမှု စီးပွါးရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သတ်သော အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာနေသူ တဦးဖြစ်သည်။)
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under သတင်းများ | No comments
ဘင်္ဂလာဒေ့်ရှ် နိုင်ငံမှ တရားမ၀င် ခိုးဝင် လာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး (၇၈) ဦးအား ပြည်သူ များ၏ သတင်းပေး မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ အစည်း များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်(ရေ) ၊ တပ်မတော် (ကြည်း) တို့၏ ပူးပေါင်း ရှာဖွေ ဖမ်းဆီး မှုကြောင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့နေ့ (၁၉) ရက်နေ့များတွင် မြိတ်မြို့ နယ် အတွင်း ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြိတ်မြို့ စန္ဒ၀တ်ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်းသီးချောင်းကျေးရွာ အနီး ချောင်းအတွင်း ဘင်္ဂါလီများ အများ အပြား ရောက် ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးရာတွင် ဘင်္ဂါလီ (၅၃) ဦးအား လည်းကောင်း၊ နေ့လည် ပိုင်းတွင် စန္ဒ၀တ်ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲကူးရွာ မြေပေါ် လွန်းကျင်းတွင် ဘင်္ဂါလီ (၁၀) ဦးခန့်အား လည်းကောင်း၊ အခြား နေရာများမှ (၈) ဦး စုစုပေါင်း (၇၁) ဦးအား ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော ဘင်္ဂါလီများအား စစ်ဆေးချက်အရ ဘင်္ဂါလီများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ခရိုင် မြို့နယ် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မြိတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ တပ်မတော် (ကြည်း)၊ တပ်မတော် (ရေ ) ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မြိတ်မြို့နယ်အတွင်း လိုက်လုံ ရှာဖွေ ခဲ့ကြရာ မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့ ည (၇) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မြိတ်မြို့ မဇော ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းထိန်ကျေးရွာ အနီး ချောင်းကမ်းစပ် ဓနိတော များ အတွင်းမှ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး (၈) ဦးအား လည်းကောင်း၊ ၄င်းတို့ စီးနင်း အသုံးပြုခဲ့သည့် အလျား (၅၀) ပေ ၊ အနံ (၁၂) ပေ အရွယ်ရှိ သစ်သားလှေ တစ်စီးအား မြင်းကောင်ရေ (၂၅) ကောင် တရုတ် အင်ဂျင်စက် (၂) လုံးတို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး (၇၈) ဦးအား ဖမ်းဆီးရ မိပြီးနောက် စစ်ဆေးချက်များ အရ ထပ်မံ ကျန်ရှိသေးကြောင်း သတင်းရသဖြင့် တာဝန်ရှိသူများက ရှာဖွေ ဖမ်းဆီး လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့ ကလည်း မြိတ်မြို့သို့ ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး (၆၅) ဦး ခန့်အား ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၄င်းတို့သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ ရှ် နိုင်ငံမှ တဆင့် စစ်တွေမြို့ သက်ကယ်ပြင် ကျေးရွာနေ ဦးရှော်ဘီထံ အခကြေးငွေ ပေးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် သွားရောက်ရန် စက်လှေဖြင့် ထွက်ခွာလာစဉ် မြိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ သည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခင် ပထမအကြိမ် ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီများအား တွေ့ရစဉ်
မကြာမီလာမည့် ထောင်ဂဏန်းဖုန်း မည်သို့ ရောင်းချပေးမည်ဆိုသည်ကို ဆက်သွယ်ရေးပင် မသိသေး
ဧပြီလ ၁ ရက်၌ စတင်၍ အထူးနှုန်းဖြင့် ချထားပေး မည့် ဖုန်းများအား မည်သို့ရောင်း ချပေးမည် ဆိုသည် ကို ယနေ့ အချိန်အထိ မသိသေးကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သိရသည်။
''ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ရောင်းပေးမယ် ဆိုတာကို ဘာမှ ညွှန်ကြား စာ မလာသေး ဘူး။ အထက် လူကြီးတွေ ဆုံးဖြတ် ပြီး မှသိ ရမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ကို တစ်လုံးပဲ ရောင်း မလား၊ လိုသ လောက်ရောင်း မလား ဆိုတာ မသိဘူး။ ကျွန်တော် တို့ကတော့ အထက်က ခိုင်းတာပဲ လုပ်ရတာပါ''ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး မှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြော သည်။
သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းမှ ကျပ်ထောင် ဂဏန်း သာရှိမည့် နှုန်း ထားဖြင့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖုန်း များရောင်း ချပေးမည်ဟု ပြောကြား ထားသည်။
အဆိုပါ သတင်း များကြောင့် ဖုန်း ဝယ်ယူချင် သူအချို့မှ အလွယ်တကူ ဖုန်းဝယ် ယူခွင့် မရမည်ကို စိုးရိမ်နေ သည့် အပြင် တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်း မည့် မိုဘိုင်း ဟန်းဆက် အရောင်း ဆိုင်များ မှာလည်း ရောင်းခွင့် မရမည်ကို အလား တူ စိုးရိမ်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
''သမဝါယမမှာ ဆန်၊ ဆီ ဝယ်ရသလို တန်းစီရမယ့်အခြေအနေ ထပ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ် ဖုန်းဝ ယ်ရမှာ နှစ်သိန်းဖုန်းဝယ်ရသလို မျိုးထက် ပိုပြီးခက်ခဲမယ် ထင်တယ်။ မှောင်ခိုဈေးကွက်လည်း ရှိလာနိုင် တယ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ သူတွေကတော့ ဘယ်လိုပဲ တန်းစီပြီး ရောင်းပေး ပါစေ အလုံးရေမကန့် သတ်ဘဲ ရောင်းပေး စေချင်တယ်။ တန်းစီပြီး ဖုန်းဝယ် ရမယ့်အဖြစ်ကို ထပ်ပြီး မကြုံစေချင်ပါဘူး''ဟု မြောက် ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှ ကိုသိန်းသန်းဦးက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် မှ Htoo မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း ဆင်းကတ်များအားဈေးနှုန်း မြှင့် တင်ရောင်း ရခြင်းမှာ ကတ်အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အတွက်ဖြစ်ကြောင်း အလွယ်တကူ ဝယ် ယူရောင်း ချခွင့် ရရှိမည်ဆိုပါက ဈေးနှုန်းမြှင့်တင် ရောင်းချကြမည် မဟုတ်ဟု ပြောသည်။
ကချင်တွင် ကလေးစစ်သားများ သုံးနေကြောင်း ABSDF မှ ဗီဒီယို ဖြင့် ထုတ်ဖော် ပြသ
မြန်မာ မီဒီယာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည့်လ လမ်းလျှောက် အဖွဲ့များ ပါးစပ် ပိတ် နေသောကြောင့် မလွတ် လပ် နိုင်သော ကလေး စစ်သားများ
ကလေး စစ်သားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြု နေကြောင်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကလေးငယ် အခွင့် အရေး ကာကွယ် သူများ၊ လူ့ အခွင့် အရေး လှုပ်ရှား သူများက မကြာခဏ ပြစ်တင် ဝေဖန် မှုများ ရှိခဲ့ သည်...
ယခုအခါ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ABSDF မြောက်ပိုင်းမှ ဗိုလ်မှူးမင်းဌေးက သက်သေ အထောက် အထားများဖြင့် အခိုင်အမာ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်သည်...
ကလေးစစ်သားများမှာ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်တွင် အသုံးပြုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစိုးရအား လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အသုံး ပြုနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်...
လတ်တလော ထွက်ပေါ်လာသော ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွင် မင်းဌေးက အဆိုပါ သက်သေ အထောက်အထားများကို ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်...
ဗီဒီယိုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်သူများ လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိ သွားခဲ့ရာ..မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင် ရှားေ ကျာ်ကြားသည့် ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင်က အောင်ဆန်းစိတ်ဓါတ် အမည်ရ သီချင်းကို တီးခတ်ေ ဖျာ်ဖြေ ခဲ့ခြင်းကို ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်...
ယင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွင် သီချင်းနားထောင်နေကြသော ကလေးစစ်သားအများ အပြား ပါဝင်နေ သည်....ယင်းဗီဒီယိုမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးစစ်သားများ သုံးစွဲမှုရှိနေသည်ကို တရားဝင် ၀န်ခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲနေသည်မှာလည်း အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်နေကြောင်း အထင် အရှား တွေ့မြင်နိုင်သည်...
(မင်းဌေး၏ ဖော်ထုတ်ချက်- https://www.facebook.com/photo.php?v=628751593808098&set=vb.100000197881048&type=2&theater)
ပလေတို ဒီမို ဖော်ထုတ်သည်။
အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under အနုပညာ | No comments
အရင်က အစာအိမ် ရောဂါခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့ နန်းဆု ရတီစိုးဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ အစာအိမ် သွေးကြော လေး တစ်ခု ပေါက်ပြီး ပါရမီ ဆေးရုံပေါ်ကို တက်ရောက် ကု သမှု ခံယူေ နရပါတယ်။ သူမရဲ့ အခြေ အနေနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ် ပူပင်နေတဲ့ မိခင်ဖြစ် သူကလည်း ဆရာဝန်တွေရဲ့ ပြောစကား အရ ဗိုက်ထဲက သွေးကြော တစ်ခု ပေါက်သွား တဲ့အတွက် သွေးတွေ ဗိုက်ထဲမှာ ထွက်နေ တာကြောင့် ခွဲစိတ် ကုသရမယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ ဟိုး အရင်က Presenter လုပ်နေစဉ်ကလည်း ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုပြီး စင်ပေါ်က ပြေးဆင်း လာခဲ့ဖူးတဲ့ နန်းဆုရတီ စိုးဟာ ဆေးသောက်လိုက်ရုံနဲ့ သက်သာ ပျောက်ကင်းခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဗိုက်က မခံ မရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လာတာကြောင့် ပါရမီဆေးရုံကို ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ အစ်ကို ဖြစ်သူတို့က ပွေ့ချီ သယ်ဆောင် ခဲ့ရတဲ့အထိ အရေးပေါ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြော်ငြာတွေ၊ MTV တွေ ရိုက်ကူးဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိနေတာ ကိုလည်း ကျန်းမာရေး ပြဿနာကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးက ဆီးဂိမ်းအား ကစားအတွက် ရိုက်ကူးမယ့် တီဗွီကြော်ငြာကိုလည်း ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ လက်ခံထား တယ် လို့ သိရပါတယ်။
လိုင်းကားပေါ် မီးဖွားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာမိန်းကလေး
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး မနေ့က ခရီးသွားရင်း လိုင်းကားပေါ်မှာ ကလေးမွေး ဖွားခဲ့တယ်လို့ ထိုင်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။
မနေ့က ညနေပိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စတူးမြို့နယ်ကနေ ဘန်ကောက်ကို သွားတဲ့လမ်းမှာပါ တဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဗိုက်နာတော့ လိုင်းကား လမ်းဘေးရပ်၊ ဖုန်းဆက်ခေါ်ထားတဲ့ အရေးပေါ်ဌာန၀န်ထမ်းတွေ မကြာခင် ရောက်လာပြီး မွေးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မွေးလာတဲ့ သမီးကလေးရော၊ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မိခင်ပါ ကျန်းမာကြတယ်၊ ဆေးရုံတခုမှာ ရှိနေတယ် လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
ကလေးဖခင်ဖြစ်သူက အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ကိုဝင်းကို ဖြစ်ပါတယ်။
“အမျိုးတွေ ရှိတဲ့ ဖိစနို့လိုမြို့မှာ ပြန်မွေးဖို့ သွားတာ မထင်မှတ်ဘဲ ကြိုမွေးသွားတယ်၊ သမီးလေးလည်း ဖြစ်တယ်၊ နောက် ... ကျန်းမာတယ်ဆိုတော့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုးကား - www.krobkruakao.com
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနယ်မြေသို့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လေ့လာစဉ် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန် ရှိသူ များက လာရောက်ကြို ဆိုခဲ့သည် (Photo -EPA)
ချင်းမိုင်၊ မတ် ၁၉ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင် ခံစာ ထုတ်ပြန် အပြီး နောက်ဆက် တွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ် များမှ တိုင်းရင်းသားဒေသများအတွက် သင်ခန်း စာယူနိုင်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်း များက ပြော သည်။
သယံဇာ တကကို အခြေခံသော လုပ်ငန်းများ တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီးတွင် ရှိနေခြင်းသည် ယခု လက်ပံတောင်း တောင် ဖြစ်ရပ် အ ပေါ် ၄င်း တို့အနေဖြင့်သတိပြု သင် ခန်းစာယူဖွယ် ပိုမိုဖြစ်စေသည်ဟု ယင်းအဖွဲ့ အစည်း များက ဆိုသည်။ ကရင် အမျိုးသား အစည်း အ ရုံး (KNU) ဒုဥက္ကဋ္ဌ နော်စီဖိုးရာ စိန်က လက်ရှိတွင် ကရင်ပြည်နယ် ၌ စီမံကိန်းသစ်များ လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များက နေ ပြည်တော်မှ တစ်ဆင့် ၄င်းတို့ ကို ကမ်းလှမ်း လာသော်လည်း ရင်းမြစ် ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာ များဖြစ်ပွား လာမည် ကို စိုးရိမ်သည့် အတွက် စီမံကိန်းသစ်များကို လက်မခံသေး ကြောင်း ပြောသည်။”အခုဆိုရင် ပဏာမ အပစ် ရပ် အခြေအနေပဲ ရှိသေး တာလေ။ ကေအင်န်ယူ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း လည်း မရှိသေး ဘူး။ အဲဒီ လို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာမှာလည်း အများကြီးစိတ်ပူတာပေါ့” ဟု နော် စီဖိုးရာစိန်က ပြော သည်။
ကေအင်န်ယူနှင့် အစိုးရမှာ လက်ရှိအခြေ အနေတွင်ခိုင်မာသော အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး တည်ဆောက် နိုင်ရန် ကြိုးစားဆဲ ကာလဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် မူအရ သ ဘောတူထား ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ရှမ်း တိုင်းရင်း သားများ ဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး ကလည်းလက်ပံတောင်းတောင် စီ မံကိန်း ကိစ္စကို ၄င်းတို့ စောင့်ကြည့် နေကြောင်း၊ ၄င်းတို့ ရှမ်းပြည်နယ် တွင်လည်း သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ် သက်၍ ဒေသခံများအကြား တွင် မကျေနပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ သည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေ သည်ဟု ကြားသိ ရကြောင်း ပြော သည်။ထိုပြဿနာများကို လာမည့် ရှမ်းညီလာခံတွင် စုံစမ်းအဖြေရှာ မည်ဟုလည်း ၄င်းက ဆက်ပြော သည်။
”ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းညီလာခံ က ဒီလ ၂ဝ ရက်ကနေ ၂၂ ရက် အထိ လုပ်မယ်။ ညီလာခံပြီးတာနဲ့ အဲဒီ ကိစ္စတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ အ စည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးပြီး ဖြေ ရှင်းဖို့ နည်းလမ်းရှာပါမယ်” ဟု ဦးခွန်ထွန်း ဦး က ပြောသည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများသည် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင် ပိုမို အဖြစ်များပြီး သယံဇာတ ခွဲဝေ မှု ပြဿနာလည်း ဖြစ်ပွားစေကြောင်း၊ ကြေးနီဖြစ်စေ၊ ဖားကန့် ဖြစ်စေ အားလုံးအတူတူပင် ဖြစ်ကြောင်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှ ခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော လက် ပံတောင်းတောင် အရေးနှင့် ပတ် သက်၍ ၄င်းတို့ တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က တာဝန်ယူ စုံစမ်းနေ သော အခြေ အနေ တွင် ဝင်ရောက် ပြောဆိုရန် ခက်ခဲခဲ့ကြောင်းလည်း ၄င်းကပြောသည်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာ ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက် ပံေ တာင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ကို ဒေသခံများက ယမန်နှစ် မှစ၍ ဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကို နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းကာ စုံစမ်း စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို ယခုလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အစီရင် ခံစာကို မကျေနပ်ြ ကသော ဒေသခံများက ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီကျော် လောက် က သပိတ် စခန်းတွေကို ရဲတွေဝင် စီးနေ ပါပြီ၊ ဒေါ်စု စကား နားမထောင်လို့ရိုက်တာလို့ ပြောပြီး ရိုက်နှက်နေပါပြီ ဆိုပြီး သတင်း သမားတွေ ကို ခေါ် တာတွေ၊ အွန်လိုင်းပေါ်တင်တာတွေ နောက် ဆည်း တည်းရွာမှာ သတင်းသမားတွေနဲ့လူ ထု ကို ရန်တိုက်ပေးတာတွေကို ဘယ် လိုဖြေ မ လဲ......
ဒါဖြင့် မင်းကကောတွေ့ဖို့ မကြိုးစားဘူးလား။ ခင်ဗျားတို့ မေးနိုင် ပါတယ်။ မကြိုးစားဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုဗထူးနဲ့ ပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်မှာ အန်တီ လာတာက ရန်ကုန်ကလူတွေနဲ့ တွေ့ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဖို့လာတာဆိုတဲ့စကား ရှိပြီး သားဖြစ် တဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်၊ ဒေသခံတွေရှင်းပြဖို့က အဓိကဖြစ် တယ် လို့ ဆိုတယ်.... ဗထူးကိုပြောတဲ့ စကားကြောင့် ဆိုပြီးလုံးမချပါနဲ့ ..... ဗထူးနဲ့ တွေ့ တာ ၁၄ ရက်နေ့မနက် မှတွေ့ တာပါ..... အဲ့ဒါကိုကော ဘယ်လိုရှင်းမလဲ.....
AB ကတော့ မပြောလိုဘူး....... လက်ရှောင်တယ်..... မနေနိုင် သူ့ဟာသူ ရှင်းလိမ့်မယ်..... လူ့ဘောင် သစ်က မိုးသီးဇွန်ရဲ့ အဖွဲ့ဟောင်း...... ဒါဆိုရင် မိုးသီးဇွန်နဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိပါဘူးဆိုပီး ဗျောင် လိမ်တယ်.....
နောက် လူ့ဘောင်သစ်ကနေ လှူတဲ့ အလှူငွေ ရတဲ့ဟာက မိုးသီးဇွန်နဲ့ ကင်းတယ်လို့ ရဲရဲတင်းတင်း ဖြေရဲ သလား........
၁၃ ရက်နေ့ ၁၄ ရက်နေ့က ကိစ္စတွေမှာ မသွဲ့ သွဲ့ ဝင်းမပါလို့ ဟန်ဝင်းအောင် ဝှက်မှေးရွာထဲ ဝင်သောင်း ကျန်း တဲ့ ကိစ္စ ကိုကော ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ..... လူတွေကို သွေးမဆူဆူအောင်လုပ်တာ၊ သွေးဆူနေတဲ့ လူတွေ ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် နိုင်အောင်မထိမ်းတာ၊ ဝမ်ပေါင်ရုံးရှေ့ မှာ ဟန်ဝင်းအောင် တပည့်တွေ မူးပြီး အော် တာ၊ ဆဲတာ ဆိုတာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ.......
ဟန်ဝင်းအောင် ဖြေကြည့်ပါ...... နိုင်ငံရေးအရ နာမည်သေဖို့ ဖြစ်လာလို့ ပြန်အဖတ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားပေး မယ့် ခင်ဗျား လုပ်ခဲ့တာတွေက သမိုင်းတွေ ဖြစ်နေပြီ..... အခုမှ ဘွာတေး ခတ်လို့ မရတာကို ဘယ် လိုဖြေ ရှင်းမလဲ.........
တော်ရုံအဆင့်နဲ့ Miss Myanmar ပြိုင်ပွဲ ၀င်မပြိုင်သင့်ကြောင်း နန်းခင်ဇေယျာပြော
မကြာခင်က ပြီးဆုံးသွားတဲ့ Miss Myanmar ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာ ဆိုတာ ကမ္ဘာသိစေရမယ်ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်တော် အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော နန်းခင်ဇေယျာခင်ကို ဘယ်လို သုံးသပ်မိ လဲဆိုပြီး ချဉ်း ကပ် ခဲ့ပါတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာခင်က ယှဉ်ပြိုင်မှု ပိုကောင်း လာတဲ့ ပြိုင်ပွဲ တစ်ရပ်လို့ ယူဆထားပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် မိန်းခလေး တောတော်များများက စကားပြော တာတွေ နားမ လည်တဲ့ အပြင် ပြည် တွင်း ဗဟုသုတကို မေးမြန်း တဲ့အခါမှာ သိရှိခြင်း မရှိ တာကြောင့် တော်တော်များများ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆိုပါ တယ်။ Miss Myanmar ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဟာ အရမ်း အရေးကြီး တာကြောင့် တော်ရုံ တန်ရုံ အရည် အချင်းနဲ့ ဆိုရင် ၀င်ပြိုင် လို့ မရဘူး ဆိုတာ သိစေချင်တယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ ပါသေး တယ်။ တကယ်လို့ ၀င်ပြိုင်မယ်ဆိုရင် သေသေချာချာ အချိန်ယူပြီး မပြိုင်ခင် ကတည်းက စာတွေဖက်၊ လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရမယ့်အပြင် ကိုယ့် ကိုကိုယ် တက် သိနားလည်ပြီး ယုံကြည်မှု ရှိပြီ ဆိုမှ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် သင့်တဲ့ ပြိုင်ပွဲ တစ်ပွဲ ဖြစ် တာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ရော၊ စာပေရော၊ ဗဟု သုတရော ပြည့်စုံနေရင် တစ်ချက်တည်းနဲ့ အောင်နိုင် ပါတယ် လို့ နန်းခင်ဇေယျာခင်က အကြံပြုသွားပါတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာခင်ကို မြန်မာ လူငယ်တစ်ချို့ အားပေး လေးစား မှု ရှိပေမယ်လို့ ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာ မိန်းခလေးများ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ပျက်စီးလာတာ နန်းခင်ဇေယျာကြောင့်လို့လည်း တစ်ချို့သောသူများက ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသလို Blog နှင့် Facebook စာမျက်နှာ များတွင်လည်း ဝေဖန်မှု သတင်းများ ပျံ့နှံ့နေတာ ကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။
အမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကိစ္စ အစိုးရအနေနဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အပေါ် ကျေနပ်လောက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက် မပေးနိုင်သေး
အမှတ် ၁၄ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း တည် ဆောက်နေ မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထုတွေ ကြုံတွေ့ နေကြ ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ တောင်း ဆို ချက်တွေကို နိုင်ငံတော် သမ္မတထံနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရထံ တင်ပြထား သော်လည်း ယခု အချိန် ထိ တောင်းဆိုထားချက်တွေကို ကျေ နပ်လောက် တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ မပေးသေးဘူးလို့ ဆရာ သဲရယ်က ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုတွေကို ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ကို ကြုံတွေ့နေ ရတဲ့ ပြဿနာတွေကို အရင်ကတည်းက တင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ အခုလည်း တကယ် တွေ့ကြုံနေ ရတယ်။ တင်ပြထားတဲ့ အချက်အလက် အားလုံးထဲမှာလည်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာတွေပါ ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရက ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ ကျေနပ်လောက်တဲ့ ဖြေရှင်း ချက်တွေ မပေးဘူး" လို့ ပြောပါတယ်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ ၎င်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထုတွေကနေ တင်ပြ ထားတာတွေ လက်ခံရရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လို့ အမှတ် ၁၄ လေ့ကျင့်ရေး တပ်ကိစ္စ ဟာ ပြည်နယ် အဆင့်တွင် ဖြေရှင်းလို့မရကြောင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ သာလျှင် ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပါ တယ်။
ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်မောင်ဦး (ခ) ဘူးရယ်က "ကျနော့်ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ပိုင် ခွင့်သည် ဟိုဘက် မှာရောက် နေ တယ်။ ကျနော့်လက်ထဲမှာမရှိဘူး ကျနော့်လက်ထဲမှာ ရှိရင် အခု ကျနော် မျက်စိ တမှိတ် အတွင်း ရှင်းပြလို့ရတယ်" လို့ပြောပါတယ်။
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဝန်ကြီးများနှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ် အမှတ် ၁၄ စစ်ရေး လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်း တည်ဆောက်နေတဲ့ ဒေသဘက်မှ ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြည်နယ် အစိုးရ ရုံးမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကြစဉ်အချိန်က ပြောဆိုသွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ အစိုးရ တို့ နောက်တကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ ရှိပါတယ် လို့ ဝန်ကြီးချုပ်က ဆက်ပြောပါတယ်။
"ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကော်မတီကနေပြီး ဒီကိစ္စကိုသူတို့ဆွေးနွေးမယ်။ ပြီးရင် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ KNPP နဲ့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ အကြမ်းဖျင်းတော့ သိရတယ်။ အခုလာမည့် ဆွေးနွေးပွဲမှာ KNPP နဲ့ ပြန်တွေ့ မယ်။ မတင်လဲမပြီးတဲ့ ဇတ်လမ်းတပိုဒ်ပဲ ဒါက ဆက်ပြောရအုံးမှာပဲ ဒီကိစ္စမပြောဘူးလို့ မပူနဲ့ ပြောမှာ ပဲ" လို့ ပြောပါတယ်။
သိုင်းလောကမှအပြန် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ၀င်ရောက်လာသည့် ဂျက်ကီချန်း
Posted by drmyochit Wednesday, March 20, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဟောင်ကောင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ အကြား စည်းလုံး ညီညွတ် မှု ရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ယခု သီတင်းပတ်တွင် ဟောင်ကောင် အက်ရှင်မင်းသား ဂျက်ကီချန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့သို့ ၀င်ရောက် ခဲ့သည်။ ဂျက်ကီချန်းသည် ကမ္ဘာကျော် မင်းသားဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်နှင့် တရုတ်တွင် အာမခံ ပရိ သတ် ရထားသူ ဖြစ်သည့် အတွက် ဟောင်ကောင်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အကြား ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရာတွင် အထောက် အကူ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဂျက်ကီချန်းကို တရုတ်ပြည်သူ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အတိုင်အပင်ခံ ညီလာခံ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွက် ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက် ၅၈ နှစ် အရွယ် ရှိ ဂျက်ကီ ချန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့သို့ ၀င်ရောက် လိုက် သည့် အ တွက် တရုတ် အစိုးရ၏ အားပေးမှုများကို ခံနေရသော်လည်း တစ်ဖက်တွင်မူ ဟောင်ကောင်မှ ဂျက်ကီ ချန်းအား အထင်အမြင် လွဲမှား မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု သတင်းများ ကြားသိရသည်။
စာနယ်ဇင်းဆိုတာ ပေါင်းကူးတံတားလို့ ဆိုလာတဲ့ ဆုပန်ထွာ
သရုပ်ဆောင် အနုပညာမှာ ပရိသတ်ရဲ့ လက်ခံ အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ အပြင် ဂီတ ဖက်မှာလည်း “မတည့် အတူနေ” စီးရီးနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ မေတ္တာကို ထပ်မံ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာက ဒုတိယမြောက် စီးရီးအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီး တစ်ဝက်နီးပါး အချောသတ်ပြီး နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်း ပွဲတွေမှာ အင်တာဗျူး သူတွေနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ ဆုပန်ထွာက ဘာမှ မဖြစ်တဲ့အပြင် ရှောင်စရာလည်း မလိုဘူး လို့ ပြောပါတယ်။ စာနယ်ဇင်း ဆိုတာ အနုပညာ သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ပရိသတ်ကြား မှာ ပေါင်းကူး တံတား ဖြစ်တာကြောင့် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်လို့ မယူဆပါ ဘူးဆိုပြီး သူမရဲ့ ခံစားချက်ကို အသိပေး ခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာလောက ရဲ့ တက်သစ်စ လူငယ်လေးတွေနဲ့ ပက် သက်ပြီးတော့ “ခွဲခြား ဆက်ဆံတာ မျိုးတွေ မရှိပါဘူး…. အားလုံးကို ပြေလည်တဲ့ စိတ်လေးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဆက်ဆံတယ်” လို့ ဆုပန်ထွာက ပြောပါ တယ်။ ဆုပန်ထွာရဲ့ ဒုတိယ စီးရီးဟာ ပထမ သူရဲ့ စီးရီးခွေထက် အောင်မြင်မှု ရနိုင်မလား…. သီချင်းပုံတွေ ကိုကော ဘယ်လိုတွေ ဖန်တီး သီဆိုထားသလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်ကြ ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့ရှိ အစိုးရစစ်တပ်ပိုင် တပ်ကုန်း တွင် အခြေချ နေထိုင်ကြသူများကို လက်ရှိနေ ရာမှ ထွက်ခွာသွား ကြရန် အရှေ့တောင်တိုင်းဗျူဟာနှင့် မြို့ခံ အာဏာ ပိုင်များက သတိပေးခဲ့သကြောင်း သိရ သည်။
မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က တပ်ကုန်းရှိ လူထုအားလုံး၏ ကိုယ် စား ဦးစိုင်း ယု၊ မခင်မျိုးဝင်းနှင့် မမြင့်သန်းတို့ကို ညနေ ၄ နာရီကျော်မှ ၅ နာရီခွဲအထိ ဘုရားသုံးဆူမြို့၊ (မရက) ရုံးတွင် အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူများမှ ခေါ်ယူ သတိပေး ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု တပ်ကုန်းတွင် အခြေချနေထိုင်သူ စောသော် ယူက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
သူက “ခေါ်တွေ့ခံရတဲ့သူတွေက ၄ ယောက်ပေါ့။ တစ်ယောက်က ခရီးလွန်လို့ မသွားနိုင်ဘူး။ သွားတဲ့သူတွေ ကျနော် တို့ကို ပြန်လာပြောတာကတော့ တပ်ကုန်းဟာ တပ်ပိုင်မြေဖြစ်တဲ့အတွက် ထွက်ဖို့ အားလုံး ပြင်ဆင် ထားတဲ့။ ဘယ်တော့ ထွက်ရမလဲတော့ မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ပြောတဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့တွေ စိုးရိမ်သော ကဖြစ် ရတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် အရှေ့တောင်တိုင်း ဗျူဟာမှ တာဝန်ရှိသူများက ယမန်နေ့ မတ်လ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် တပ်ကုန်းရှိ လူထု များအား တွေ့ဆုံရန် ချိန်းထားသော်လည်း နံနက် ၇ နာရီတွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ သည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါတပ်ကုန်းတွင် နေထိုင်သူများမှာ ၎င်းတို့နေထိုင်ရန် မြေကွက်ကို တပ်ကုန်းစခန်း တာဝန်ရှိသူများထံမှ ထိုင်း ဘတ်ငွေ သုံးထောင်၊ ငါးထောင်မှ တစ်သောင်းအထိ ၀ယ်ယူခဲ့ရသလို မြို့ခံရပ်ကွက်(၂)နှင့် (၃)ရှိ အာဏာပိုင်များကိုလည်း ယခုအချိန်အထိ လစဉ် ဘတ်ငွေ ၁၀၀ အခွန်ပေးဆောင်ရသည့်အပြင် ကင်းကြေးငွေဘတ် ၄၀ မှ ၅၀ အထိ ပုံမှန် ပေးဆောင်နေရကြောင်း တပ်ကုန်းဒေသခံများက ပြောသည်။
အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက “တပ်ကုန်းဟာ စစ်တပ်က ပိုင်တဲ့အတွက် တချိန်ချိန်မှာတော့ ပြန်သိမ်းယူမှာပဲ။ ကျူးကျော်မြေအဖြစ် နေထိုင်တဲ့သူကလည်း ထွက်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီ၏ မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည် ပြောဆိုသည်။
သို့သော် တပ်ကုန်းနေ လူထုများ ထွက်ခွာမည်ဆိုပါက ဘုရားသုံးဆူမြို့ရှိ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ-USDP မှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်ရန် အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့်ဆံ့သည့် မြေနေရာတစ်ခု စီစဉ်ထားပြီး ပေ ၃၀-၄၀ ပတ်လည်ရှိ မြေတစ်ကွက်ကို ဘတ်ငွေ ၇,၅၀၀ မှ ၃၀,၀၀၀ အထိ ရောင်းချ ရန်ရှိသော် လည်း တောင်ကမ်းပါးနေရာဖြစ်နေ၍ နေထိုင်ချင်သူမရှိကြောင်း စောသ်ာယူက ဖြည့်စွက် ပြောဆို သည်။
အမည် မဖော် လိုသူ တပ်ကုန်း ဒေသခံ တစ်ဦးကလည်း “ဒီေ နရာဟာ အစိုးရ စစ်တပ် ဘက်က တပ်မြေလို့ ပြောပေမယ့် တပ်ကပဲ ရောင်း တယ်။ နောက် ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ထား ရတာတောင် ကျူးကျော်မြေမှာ နေတယ်လို့ လည်း အပြော ခံရတယ်။ ကျမတို့ကလည်း ဒီမှာနေလာတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ ထွက်ခိုင်း မယ်ဆိုရင် အခက် အခဲ အများကြီး ရှိမှာဖြစ်လို့ ထွက်မပေးနိုင်ဘူး” ဟု ကေအိုင် စီသို့ ပြောသည်။
မွန်၊ မြန်မာနှင့် ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကာ အိမ်ခြေ ၁၀၂ လုံးရှိသော တပ်ကုန်းမှာ အစိုးရ စစ်တပ် ကုန်းစခန်း ခြံဝင်းအပြင်ဘက်၌ တည်ရှိ၍ ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကျော်က ချုံတော ထူထပ်ကာ မြေလွတ်မြေ ရိုင်းများ သဖြင့် တပ်ကုန်းသို့ လာရောက်အမှုထမ်းသော အစိုးရတပ်ရင်းများက မြေကွက်ချပေးကာ ရောင်းချ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ရန် အတွက် ရွာထဲတွင် လှည့်လည် သွေးဆောင် နေသူ များအား လူကုန် ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူ ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက် အရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မတ်လ ၁၂ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်အိုင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ နမ့်စမ်ကျေးရွာတွင် တစ်ခုလပ်/အပျိုများမှ တရုတ်နိုင်ငံသားများအား ယူမည့်သူရှိပါက တင့်တောင်း တင့်တယ် တောင်းရမ်းယူမည်ဟု လှည့်လည်ပြောဆိုနေသူ လားရှိုးမြို့၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၁၇) နေ မအေး ရင် (ခ) မအားလျှံ (၄၃) နှစ်နှင့် လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်အိုင်ကျေးရွာနေ ဒေါ်အေးဖြစ် (၅၆) နှစ်တို့ နှစ်ဦး အား နမ့်စမ် ရွာသူကြီး အိမ်တွင် ခေါ်ဆောင် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသဖြင့် လားရှိုး လူကုန် ကူးမှု (အထူး အဖွဲ့) မှ တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ သွားရောက် စစ်ဆေး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့က မိခင်ဒေါ်အေးဖြစ်သည် မအေးရင်နှင့်အတူ လင်ချန်းမြို့သို့ လိုက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ လင်ချန်းမြို့တွင် မအေးရင်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသား ကျော့မြင်ချောင်၏ ညီဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ လီရှန်းချန်က မြန်မာအမျိုးသမီးနှင့် လက်ထပ်လိုကြောင်း၊ တောင်းရမ်းခအဖြစ် ယွမ်ငွေ (၁၀၀၀၀) ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း အကုန်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ၎င်း တို့နှစ်ဦး သည် ကျော့မြင်ချောင်နှင့် လီရှန်းချန်တို့နှစ်ဦးအား မတ်လ ၄ ရက်နေ့က ချင်းရွှေဟော် မှတစ် ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး လားရှိုးမြို့ (၁၂) ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မအေးရင် ငှားရမ်းနေ ထိုင် သည့် နေအိမ်တွင် တည်းခိုနေထိုင်စေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မအေးရင်၏ နေအိမ်တွင် တည်းခိုနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ကျော့မြင်ချောင် (၃၉)နှစ်နှင့် လီရှန်းချန် (၃၀)နှစ် တို့အား ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး ဒေါ်အေးဖြစ်၊ မအေးရင် (ခ) အားလျှံ၊ ကျော့မြင်ချောင်နှင့် လီရှန်းချန် တို့အား အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပဲခူးတိုင်း မင်းလှမြို့နယ်မှ မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်သမား
ပဲခူးတိုင်း မင်းလှမြို့နယ် ကန်သာယာကျေးရွာအုပ်စု အနောက် စုကျေး ရွာမှာ နေထိုင်သူ ဦးဖိုးကြွယ် ဆိုသူကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ လူ ၃ ဦးကအိမ်ပေါ် တက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်ပူ ပန်နေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီလူ သတ်မှုကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က ယနေ့ အချိန် ထိ ဖမ်း ဆီး အရေး ယူနိုင်ခြင်း မရှိသေး တာကြောင့်
ဒါကြောင့် အာဏာ ပိုင်တွေ အနေနဲ့ ဒီ လူသတ် မှုကို အမြန်ဆုံ ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ အသက် ခံရသူ ဦးဖိုးကြွယ်ရဲ့ မိသား စုဝင်တွေ နဲ့ ဒေသခံတွေက ဒီကနေ့ ၁၂း၃၀ နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့ ၃၆ လမ်း အလယ် ဘလောက် က မြန်မာသတင်းသမားများကွန်ယက် ရုံးခန်းမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး မေတ္တာရပ် ခံခဲ့ကြပါတယ်။
မွန်လွဲ ၂း၃၀ နာရီ အထိပြုလုပ်တဲ့ ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများမှ သ တင်းထောက် အယောက် ၂၀ ကျော် တက်ရောက် သတင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်နဲ့ လွှတ်တော် အဆောက် အဦးကို တိုက်ခိုက်တာ ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ပြ ဗွီဒီယိုကို မြောက်ကို ရီးယားက အင်္ဂါနေ့က ထုတ်လွှင့် ခဲ့ပါတယ်။ ဗွီဒီယို ထဲမှာ အမေရိကန် လွှတ်တော်ကို ဒုံးကျည်နဲ့ တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီး တာကို ပြသသလို၊ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ကို ပစ်ခတ်ဖို့ ကွန်ပြူတာ စနစ်သုံးပြီး ချိန်ရွယ် ထားပုံကိုလည်း ပြသ ထား ပါတယ်။
ကုလ သမဂ္ဂ က မြောက်ကိုရီးယားကို သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှု အသစ် ချမှတ်တာကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ နျူကလီးယားစစ် ဆင်နွှဲ မယ်လို့ မြောက် ကိုရီးယား ဘက်က ခြိမ်းခြောက် ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်နဲ့ လက်တွဲပြီး ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေ တဲ့ တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကိုလည်း တိုက်ခိုက် မယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။ တောင် ကိုရီး ယားနဲ့ အမေရိ ကန်တို့ရဲ့ ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့် မှုဟာ စစ်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင် နေတာလို့ မြင်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်း ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့နျူကလီးယား ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက် နိုင်တဲ့ B-52 ဗုံးကျဲယာဉ်တွေကို တောင်ကိုရီးယားမှာ ပျံသန်းပြသခဲ့တာမို့ အခြေအနေတွေဟာ ပိုပြီး တင်းမာလာ နေပါတယ်။
ဒီလ အစော ပိုင်းမှာ တုန်းကတော့ ၁၉၅၃ ခုနှစ်ကတည်းက တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချုပ် ကို သူ့ဘက်က ဖျက်ပစ်မယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
Video Flie From CNN
အီရတ်မှာ တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် လူအများ သေဆုံး
Photo: မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့တွေ ဝင်တိုက် ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် မြောက် နှစ်ပတ်လည်မှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့
အီရတ် နိုင်ငံ ဘဂ်ဂဒက် မြို့တော် တခွင်မှာ အစီ အစဉ် တကျ ဗုံး ဖောက်ခွဲ မှုနဲ့ အသေခံ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက် မှုတွေ ကြောင့် လူပေါင်း ၅၀ နီးပါး သေဆုံးပြီး နောက်ထပ် ၁၆၀ ကျော် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။
အီရတ် နိုင်ငံကို အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှု ၁၀ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အချိန်မှာ အကြမ်း နည်းနဲ့ တိုက် ခိုက်မှု တွေ ဖြစ်လာ ခဲ့တာပါ။
ဘယ် အဖွဲ့ ကမှ သူတို့ လက်ချက် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ရှီယာ မွတ်ဆလင် တွေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရကို မတည် မငြိမ် ဖြစ်အောင် အယ်လ် ကာအီးဒါးနဲ့ ဆက်နွယ် နေတဲ့ ဆူနီ သူပုန် အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့က အလားတူ တိုက်ခိုက်မှု တွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လုံခြုံရေး အခြေ အနေတွေကြောင့် လာမယ့် လမှာ ပြုလုပ်မယ့် ပြည်နယ် ရွေးကာက်ပွဲ တွေကို ပြည်နယ် နှစ်ခုမှာ နောက်ထပ် ခြောက်လ အထိ အစိုးရက ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ ပါတယ်။
စလုံးမလေး ကို သွားဆွလို့ ကူညီချင်သူတွေ လက်စွမ်းပြ ခံလိုက်ရတဲ့ စင်္ကာပူရောက် အဖြူကောင်
စင်္ကာပူတွင်တော့ အနောက်နိုင်ငံသားများကို ရွှေများမှ အဖြူကောင်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ စင်္ကာ ပူ မလေးများ သည်လည်း ထိုအဖြူကောင်များကို အင်မတန် အထင်ကြီး၏။
တစ်နေ့သောအခါ မက်ဒေါ်နယ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် နှင့် အတူ ဆက်ဆီ တိုပြတ် အမျိုးသမီးကလေး မုန့်လာစားလေသည်။ မုန့်ယူရန် ကောင်တာသို့ အသွား အဖြူကောင်အနီးသို့ အဖြတ် ၄င်းမှ တို့ထိဖို့ ကြိုးစားသဖြင့် ကယ်ကြပါအုံး (Molest) ဟု စလုံးမလေးမှ အော်၏။
စလုံးမလေး အော်သံကြောင့် တစ်ခြားဝိုင်းမှ အမည်မသိ လူ ၂ ဦး ရောက်လာပြီး အဖြူကောင်ကို သမလိုက် သည်မှာ ပုံပါ အတိုင်း သွေးများ အိုင်လေတော့သည်။
ရဲများ ရောက်လာသည့်အခါတွင်တော့ ထိုသူများလည်း မရှိတော့။ မျက်လုံးတွင် မျက်ရည်များ ပြည့်ေ နသော စလုံးမလေး၏ ရန်တွေ့တိုင်ကြားသံ တညံညံသာ ကြားနေရတော့သည်။
From Shin Min Daily News:
A Caucasian man was beaten up by two men afterawoman screamed out that she had been molested.
The incident occurred ataMacDonald's fast food restaurant this morning at around 5.40am.
When the reporter reached the scene, the reporter sawafashionably-dressed woman arguing withaCaucasian man. The man's face with covered with blood.
The woman was dressed inatight black dress withacurvaceous body. Her hair was long and golden and she had very fair skin. She turned many heads with her big, liquid eyes.
According to Shin Min Daily News, the 20-something woman was eating at the restaurant with two other friends. She was going to the counter to buy food when she passed the Caucasian man's table.
He then tried to startaconversation with her.
Her friends said he then touched her but she immediately swiped his hand away.
"Two men who I do not know came over and helped me after they saw what happened," she said.
The two men beat the Caucasian man, striking him on his nose. Blood streamed from his nose and his whole face was covered with blood.
His friend then informed some policemen who were nearby about what had happened.
When the police arrived at the scene, the two men had already left. However, the woman and her friends continued arguing with the Caucasian man.
ရဲဝန်ထမ်းနှင့် အရပ်သားတို့ ထိုးကြိတ်ရာမှ အပြန်အလှန်တရားစွဲ
ရန်ကုန်၊ မတ်- ၁၉
အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ် ရဲကင်းမှ ရဲဝန်ထမ်း အပါအ၀င် သတင်းပေး လေးယောက် တို့နှင့် အရပ်သား သုံးဦး ထိုးကြိတ် ကြရာမှ ဆွဲကြိုးဖြတ် လုယက်မှု၊ တာဝန် ၀တ္တရား နှောင့်ယှက်မှု တို့ဖြင့် အပြန် အလှန် အမှုဖွင့် ထားကြ ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အရပ်သား လူငယ် ၃ ဦးသည် မတ် ၁၇ရက် ည ခုနှစ်နာရီခန့်က ထန်းတပင်မြို့နယ်မှ လှိုင်သာ ယာမြို့နယ် သို့ မိတ်ဆွေ များအား မော်တော် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်ပို့ အပြီး အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ် အနီးတွင် ဆွဲကြိုး ဖြတ် လုယက်ခံ ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အရပ်သား များဘက် ကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ကယ်ကို သူတို့တွေက ကျော်တက်တဲ့ အချိန် သူတို့ထဲက ရဲတစ်ယောက်ကို သိနေလို့ လှမ်း နှုတ်ဆက် လိုက်သေးတယ်၊ စည်ပင် သာယာ တံတား မောင်း တံနား လည်းရောက်ရော စောစော ကကျော်တက် သွားတဲ့ ရဲတွေက ဂိတ်တံ ခါးပိတ် စောင့်နေပြီး တစ်ယောက်ကို လက်ထိပ် ခတ်တယ်၊ နောက်ဆိုင် ကယ်တစ်စီး က ကျွန်တော့် တို့ ဆိုင် ကယ်ကို ပိတ်တိုက် လိုက်လို့ ကျွန်တော် တို့ သုံး ဦးလုံး ဆိုင်ကယ်ပေါ် က လွင့်ကျ သွားတယ်၊ ရဲတစ်ယောက်က လက်ထိပ်ခတ် ခံထားရသူရဲ့ ဆွဲကြိုး ကိုဖြတ် လုတယ်၊ နောက်တစ်ယောက်က မင်း ဆွဲကြိုးကို လည်းဖြတ် တယ်ကွာ လို့ပြောပြီး ဆွဲဖြတ် ယူသွားတယ်၊ ကျွန်တော် တို့လေးယောက် လုံးကို ၀ိုင်းထိုးကြတယ်၊ ကျွန်တော် အင်္ကျီ အိတ်ကပ်ထဲ ထည့် ထားတဲ့ ငွေငါးသောင်း လည်း လုံးထွေးနေ တုန်းပျောက် သွားတယ်”ဟု အသက် ၂၇ နှစ်ရှိ အလု ခံရသူ ဆိုသူ ကပြော သည်။
အဆို ပါနေရာ သို့ အနီးရှိ ရွာသစ်ကျေးရွာမှ လူတစ်ချို့ရောက်လာပြီး ဖျန်ဖြေပေးသောအခါမှ လူစုကွဲ သွားကြ သည်။ အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲကင်းမှ ရဲတပ်သားနှစ်ဦးနှင့် ရဲသတင်းပေးနှစ် ဦးတို့ ထွက်ပြေး သွားကြရာ တစ်ကျပ် သားခန့် ရွှေဆွဲကြိုး တစ်ကုံး၊ တစ်ကျပ် ခွဲသားခန့် ရွှေဆွဲကြိုး တစ်ကုံးနှင့် ငွေကျပ် ငါးသောင်း ရှာမတွေ့ တော့ဘဲ ၎င်းတို့၏ ဆိုင်ကယ် တစ်စီးပင် ကျန်ခဲ့ကြောင်း လုယက် ခံရသူ ကပြောသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား တက်သစ် ရဲစခန်းသို့ မေးမြန်းရာ စခန်းမှုး ရဲအုပ် ဦးတင်မြင့်က နှစ်ဖက် စလုံးကို စစ်ဆေး လျက် လုယက်မှု၊ အားပေး ကူညီမှု တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် ပေးထား သကဲ့သို့ ရဲများ ကလည်း တာဝန် ၀တ္တရား ထမ်းဆောင် ချိန် ကိုယ်ထိ လက်ရောက်မှု၊ ဆဲဆို မှုတို့ဖြင့် အမှုပြန် ဖွင့်ထားပြီး နှစ်ဖက်စလုံး ဒဏ်ရာ ရကာ ရဲဝန် ထမ်းများအား ထန်းတပင် ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါး ကုသနေကာ အရပ်သား များက အင်းစိန် ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါး ကုသ နေကြောင်း ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် အရပ် သား များ ဘက်မှ တက်သစ် ရဲစခန်းတွင် ပုဒ်မ ၃၉၂၊ ၁၁၄ တို့ဖြင့် အမှု ဖွင့်ထား သကဲ့သို့ ရဲ ၀န်ထမ်း များကလည်း တက်သစ် ရဲစခန်း တွင်ပင် ပုဒ်မ ၃၃၂/ ၂၉၄ တို့ဖြင့် အပြန် အလှန် အမှုဖွင့် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Popular Myanamr News Journal
သောင်တူးဖော်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – POM)
ရှမ်းပြည် တာချီလိတ်ခရိုင် တာလေမြို့ရှိ တိမ်ကောလာသည့် နမ့်လင်း ချောင်းအတွင်း သဲတူး ဖော်မှုကို ဗန်းပြပြီး တရုတ်လူမျိုးများ တရားမ၀င် ရွှေ တူးဖော်ကြောင်း ဒေသ ခံများထံမှ သိရသည်။
မိုင်းလားဒေသ အခြေစိုက် လွိုင်လုံ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီက တိမ်ကောလာသည့် နမ့်လင်းချောင်း တူးဖော်ရန် အဆိုပါ တရုတ်လူမျိုးများကို ခေါ်ယူလာခြင်းဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တနှစ်ပတ် နေထိုင်ခွင့်ရှိသည့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တာလေ ဒေသခံတဦးက “သောင်တူးတယ်ဆိုပြီး ချောင်းကြမ်းပြင်က ဆယ်ယူထားတဲ့သဲတွေကို သောင်တူး သင်္ဘောပေါ်မှာ တင်မျှောတိုက်စနစ်နဲ့ ရွှေထုတ်ယူနေတာ တွေ့ရတယ်” ဟု ဆိုသည်။
နမ့် လင်းချောင်းသည် တာလေဒေသကို ဖြတ်ကာ မဲခေါင်မြစ်အတွင်း စီးဝင်သည့် ချောင်းတခုဖြစ်ပြီး ယခုအခါ တိမ်ကော လာသည့် အတွက် လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီး ဌာန၏ အကူအညီနှင့် တာလေဒေသ အာဏာပိုင်များ၊ မြို့မိမြိုဖများ ပူးပေါင်းကာ လွိုင်လုံ သတ္တု တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီအား ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် ငှားရမ်း လုပ်ဆောင် စေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ ရက် ခန့်က လုပ်ငန်း စတင်ခဲ့ဖြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာလေ ပြည်သူ စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင် လတ်က “သောင်တူး စက်ကို ကျနော် တို့က မမြင်ဖူးဘူး။ သူတို့ လုပ်ချင် တယ် ဆိုလို့ ငှားလိုက်တာ။ သူတို့က သင်္ဘောပေါ်မှာ ခဲသပ်သပ်၊ သဲသပ်သပ် ပြန်လုပ်ပြီး ကမ်းပေါ်ကို တင်ပေးတာကို ကျေးဇူးတောင် တင်နေသေးတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယင်း တရုတ်လူမျိုးများကို မကြာသေးမီက တာချီလိတ်ခရိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ၀င်ရောက်စစ်ဆေးမှု ပြုခဲ့ကြောင်း ဦးခင်မောင်လတ်က ဆိုသည်။
ယင်းသို့ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် လုပ်ငန်းရပ်ထားကာ တရုတ်များ ယင်းတူးဖော်မှုမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားကြောင်း၊ သောင်တူးဖော်မှုနှင့် တဆက်တည်း တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှု လုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဝန် ခံကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ လွိုင်လုံ ကုမ္ပဏီသည် နမ့်လင်းချောင်းတလျှောက် ပေ ၄ ထောင်ကျော် ဆက်လက် တူးဖော်ရန် ကျန်နေ သေးသည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်ခန့်က တာလေဒေသကို ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်ကြောင့် တာလေ၊ မိုင်းလင်း၊ နားယောင်း၊ ကျကူနီ စသည့် နယ်မြေများတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများအပြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းရှင်းများ အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငလျင်များ လှုပ် ခတ်ပြီး သည့်နောက် အဆိုပါ ဒေသများတွင် ရွှေကြောအသစ်များ တွေ့ရှိရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် မြန်မာ ကလေး သူငယ်များ ရောင်းစား ခံရ မှုနှုန်း မှာ မှတ်တမ်း တင်နိုင်သည့် စာရင်း များအရ တနှစ် လျှင် ၁၀၀ ကျော် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ကလေး လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးအဖွဲ့ ဖြစ် သည့် Burma Anti Child Trafficking (Burma ACT) အဖွဲ့မှ သိရ သည်။
ထိုင်း အခြေစိုက် Burma ACT ဒုတိယ တာဝန်ခံ ဦးစောနေဦးက “ရောင်းစားခံရတဲ့ ကလေးတွေမှာ မိန်းကလေး က များ တယ်။ တချို့ ကလေးတွေ ကို မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က ရောင်း စားတာ။ တချို့က ကလေး ဗိုက်ထဲမှာ ကတည်းက ကြိုရောင်း ထားတာ မျိုးလည်း ရှိတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၁၂ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Burma ACT မှ ရရှိသော ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ရောင်းစားခံရသည့် ကလေးသူငယ် စုစုပေါင်း ၁၂၂ မှုကို ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဖွဲ့ကို စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ယခု ချိန်အထိ လူကုန် ကူးခံ ရသည့် ကလေး ငယ်ပေါင်း ၁ ထောင်ကျော် ကို ကူညီပေးနိုင် ခဲ့ကြောင်း လည်း ယင်း အဖွဲ့မှ သိရသည်။
ရောင်းစား ခံရသည့် ကလေးငယ်များမှာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းတို့မှ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အငယ် ဆုံး ၁၀ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အတွင်းရှိကာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသားများက ကလေးတဦးလျှင် ထိုင်းဘတ် ၅ ထောင် (အမေရိ ကန် ဒေါ်လာ ၁၇၀ ကျော်) မှ ၅ သောင်း (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ကျော်) အထိ ပေးကာ ၀ယ်ယူကြောင်း Burma ACT အဖွဲ့မှ သိရသည်။
“ကလေးတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ပန်းရောင်းခိုင်းတာ၊ သတင်းစာ ရောင်းခိုင်းတာတွေ လုပ်တယ်။ တချို့ မိန်းကလေး တွေဆိုရင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေမှာ ခိုင်းစေခံနေရတာမျိုး ရှိတယ်။ ရောင်းစားတဲ့ ပွဲစားတွေ က ဗမာတွေ များတယ်” ဟု ဦးစောနေဦးက ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကလေးသူငယ် ရောင်းစားသည့် အမှုများနှင့် ပတ်သက်သော တရားခံကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ လွှဲပြောင်း ပေးလေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် မည်သို့ ဆက်လက် အရေးယူသည်ကိုမူ အချက်အလက်များ မရရှိကြောင်း ဦးစောနေဦးက ဆက်လက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရသည့် ကလေးငယ်များအား မဲဆောက်မြို့ရှိ ပြန်လည် ပြုစုရေး ကျောင်း များ သို့ ပို့ကာ အတန်းပညာ ဆက်လက်သင်ကြားပေးခြင်း၊ လက်မှုအတတ်ပညာများ ဆက်လက် သင်ကြားပေးခြင်း၊ မိဘနှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ပေးကြောင်း Burma ACT အဖွဲ့ ၀င်ဖြစ် သည့် Social Action for Women (SAW) အဖွဲ့မှ ဦးမင်းမင်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ထိုင်း-မြန်မာ အစိုးရကြား အလုပ်သမားတင်သွင်းမှု သဘောတူစာချုပ် (MOU) စနစ် ပေါ်ပေါက် လာပြီးသည့် နောက်ပိုင်း စာရွက်စာတမ်းများတွင် အသက်လိမ်လည် ဖြည့်သွင်းမှုများ ရှိလာကြောင်း သိရ သည်။
ဦးမင်း မင်းက “MOU တွေ ခေတ်စားလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာ တယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးဘဲ လိမ်ပြီးလုပ်တာကတဆင့် လူကုန်ကူးမှုတွေအထိ ဖြစ်လာ တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးစောနေ ဦးက “ကျနော်တို့က အရေးယူတဲ့ အဖွဲ့မဟုတ်လို့ အရေးယူလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးရောင်း စားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိဘတွေကို ပညာပေးမှုအပိုင်းတွေ လိုက်လုပ်တယ်။ မဲဆောက်က ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားတွေ အများဆုံးနေတဲ့ နယ်ဘက်တွေကို ဆင်းပြီး ပြဇာတ်တွေ လိုက်ကပြတာမျိုး လုပ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
Burma ACT အဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ဒေါ်ကြည်ဖြူကလည်း “ကလေးတွေ ရောင်းစားခံနေရတဲ့ အမှုတွေကို အစိုးရတခုတည်း မဟုတ်ဘဲ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတွေအထိ ရောက်နိုင်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကလေးသူငယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင်တားဆီးရေး စာချုပ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အ တည်ပြု လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည်။ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ကိုလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဋ္ဌာန၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး အထူး အဖွဲ့၊ ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရက်မှု အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ တို့ ပူးပေါင်းကာ လူကုန်ကူး ခံရသူများအား ယာယီ လက်ခံစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ် ထားကြောင်း လည်း သိရသည်။
ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည့် ရာဇဝတ်မှု တားဆီးရေး သဘော တူ စာချုပ်ကို အီတလီနိုင်ငံ၊ ပါလာမိုမြို့တွင် ၂ဝဝဝပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုနေ့ အား ကလေးသူငယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဆန့်ကျင် တားဆီးရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင် ငံက ထိုစာချုပ်ကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နှင်းရေး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အဆင့်အထိ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နှင်းရေး အဖွဲ့များ၊ အထူးစောင့်ကြည့် အဖွဲ့များ ထားရှိခဲ့ပြီး မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ ၆ နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း ကာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ လူကုန်ကူးမှုပေါင်း ၈၈၅ မှုကို ဖော်ထုတ် အရေး ယူနိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးခံရသူ ၁,၉၃၈ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကာ တရားခံ ၂,၄၅၃ ဦးကို အရေး ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်လူမျိုးတွေရှိနေသရွေ့ KNU ဆိုတာရှိနေမှာပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအခုထက်ထိတော့ရှိနေတုန်းပဲ ဒါဟာနည်းစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့လား ပရိယာယ်အနေနဲ့လားတော့မသိဘူးဟုဆိုသည့်စောကလူးထူး
ကရင်ပြည်နယ် သံတောင် မြို့နယ် ဆာမူထော် (Hsa Mu Htaw)လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့က သံထောင်ဒေ သ သံထောင် တုန်အတွင်း တိုင်းရင်း သားများ အတွက် ဒေသတွင်းကွန်ရက်ချိတ် ဆက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဆောင် ရွက်ရန် အတွက် အစည်းအဝေးကို(၁၈.၃.၂၀၁၂) ရက်မှ စတင်ကာ (၇)ရက်ကြာကျင်း ပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
သံတောင်မြို့နယ် ဒေသတွင်း ဆာမူထော် အသင်း ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူစော ကလူထူးကို နှစ်ပေါင်း (၆၀)ကျော်ကြာ စစ်ဘေးစစ် ဒဏ်ခံခဲ့ ရတဲ့ဒေသ အတွင်း ပြည် သူလူ ထုရဲ့အခြေ အနေ ငြိမ်းချမ်း ရေးဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးအခြေ အနေများနှင့်ပတ်သက်၍ မေး မြန်းရာ တွင်-
““ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဆင့်၎ ဆင့်ခွဲ ထားပြီးတော့ လုပ်ဆောင် ပါ တယ်။ ပထမအဆင့်က လူမှု အထောက် အကူပြု Capacity အပိုင်း ကိုမြှင့်တင်ပေးတယ်။ဒုတိယ က ဒေသတစ်ခုကို ၁၀ယောက်စီ ရွေးပြီးဒေသ သုံးခု အတွက် အယောက် ၃၀ကို လူထုကိုယ်စား လှယ်တွေက KNU တပ်မဟာမှူး တွေနဲ့ထပ်တွေ့မယ်။အခုအ ဆင့် သုံးထိရောက်လာပါပြီ။အဆင့်(၄) လုပ်ဆောင်ဖို့ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒေသသုံးခုဆိုပေမဲ့လည်း သံတောင် ဒေသတစ် ခုလုံး ကိုပြော တာပါ။ ရွာ တွေ ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ကျွန်တော် တို့ရပ် တည်မယ်။ ခေါင်းစဉ်သုံးခုနဲ့ပြည်သူကိုယ်စား လှယ်တွေကိုချပြပြီးတင်ခိုင်းမယ်။
တချို့ ကိစ္စတွေကို KNU တပ်မဟာ(၂)ကနေဖြေရှင်းလို့ရ တာတွေရှိတယ်။ တချို့ကိစ္စကျ တော့ ဗဟို ဌာန ချုပ် ကပဲဖြေရှင်း တယ်။ဗဟိုဌာနချုပ်ပိုင်းကလည်း အစိုးရပိုင်းကိုတောင်းဆိုရမယ့် အရာတွေရှိပါတယ်။
အရင် တုန်း ကငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပျက်ပြယ် ခဲ့တာတွေအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်။
အခုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက် ပြီးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပဲရှိပါ သေးတယ်။ တကယ်ပဲထာဝရ တည်တံ့ ခိုင်မြဲ တဲ့ငြိမ်း ချမ်းရေးကို လှမ်းချင်ပါတယ်။ ပြည်သူဘက် ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။
အစိုးရဘက်ပိုင်းကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလုပ် ကိုင်စားသောက်ခွင့်ပြုလာပါတယ်။ ငြိမ်း ချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးနည်း စနစ်အနေတစ်ခုနဲ့လား၊ပရိယာယ် လားမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည် သူတွေ သွားတဲ့လာ တဲ့အခါ အန္တ ရာယ်အဖြစ်အခုထိရှိနေသေးတဲ့ မိုင်းကိစ်္စတွေကိုလည်း ဗဟိုဌာန ချုပ်ကိုတင် သွားမယ်။ ဗဟိုဌာန ချုပ်ကလည်း စစ်အစိုးရဘက်က မိုင်းရှင်းလင်းရေး တောင်းဆိုဖို့တင် ပြသွား မှာဖြစ် တယ် လို့သိရပါတယ်။ KNU့ နဲ့ KNLA ဆိုပြီးရှိပါ တယ်။ KNLA ရှိရေးမရှိရေး ကရင်လူမျိုးတွေရှိနေသရွေ့ KNU ဆိုတာ ရှိနေ မှာပဲလေ။ အဲဒီတော့ KNU ရှိမှဖြစ်မှာ လေ။ ဒါကတော့ဖြစ်မှာ ကရင် လူမျိုးဆိုတာလည်း KNU ရှိဖြစ်မှာလေ။ ကျွန်တော်တို့ ကရင်လူမျိုးတွေတော့ မရှိမ ဖြစ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ တခြား လူမျိုးတွေ ကျတော့ ဘယ်လိုထင် မလဲမပြောတတ်ဘူးဗျ။ KNU ရှိ ရင် KNLA ရှိရင်ပဲ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ် တတ်ကြ လို့ ကျွန်တော် ဒီစကားပြော ရတာပါ””ဟု ဆိုပါ သည်။
ညီအစ်ကိုချင်း ဓါးထိုးမှု ဖြစ်ပွါး တစ်ဦးသေ တစ်ဦး ဒဏ...
တီးတိန်မြို့နှင့် တမူးမြို့များတွင် အသက်၁၅နှစ်အထက်...
မကြာမီလာမည့် ထောင်ဂဏန်းဖုန်း မည်သို့ ရောင်းချပေးမည...
အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားတဲ့ နန်...
လိုင်းကားပေါ် မီးဖွားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာမိ...
လက်ပံတောင်းတောင် ဖြစ်ရပ်သည် တိုင်းရင်းသားများအတွက်...
တော်ရုံအဆင့်နဲ့ Miss Myanmar ပြိုင်ပွဲ ၀င်မပြိုင်...
အမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကိစ္စ အစိုးရအနေနဲ့ ဒေ...
သိုင်းလောကမှအပြန် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ၀င်ရောက်လာသည့် ...
စာနယ်ဇင်းဆိုတာ ပေါင်းကူးတံတားလို့ ဆိုလာတဲ့ ဆုပန်ထွ...
တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ရန် သွေးဆောင်သူများအား ...
ပဲခူးတိုင်း မင်းလှမြို့နယ်မှ မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်...
စလုံးမလေး ကို သွားဆွလို့ ကူညီချင်သူတွေ လက်စွမ်းပြ ...
ရဲဝန်ထမ်းနှင့် အရပ်သားတို့ ထိုးကြိတ်ရာမှ အပြန်အလှန...
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကလေးသူငယ် ကုန်ကူးမှု နှစ်စဉ် ၁...
ကရင်လူမျိုးတွေရှိနေသရွေ့ KNU ဆိုတာရှိနေမှာပဲ ငြိမ...